“သားဖွဈသူကို မမေကေလှဲရငျကနျြတာအေးဆေးပါလို့ ပွောလာတဲ့ ဖွိုးငှစေိုး” – Cele Gabar
တဈခတျေတဈခါ ဗီစီဒီခတျေထဲကနေ့ ပြိုပြိုမမေတေို့ရဲ့ အသညျးကြျောမငျသားတဈလကျဖွဈခဲ့ပွီး ယနအေ့ခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုရရှိနတေဲ့ မငျးသား ဖွိုးငှစေိုးကတော့ သားဖွဈသူကို မမေကေလှဲရငျ ကနျြတာအေးဆေးပါဆိုတဲ့အကွောငျးကို “ဟိုဘဲကွီးနဲ့ဒီဘဲလေး ဘဲကွီးလုပျသမြှဘဲလေးကလိုကျလုပျတယျ။ ကဲ ဘဲကွီး သတိသာထားနတေော့ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ သိပျမကွာခငျစတှတေ့ော့မှာ. ဘာဘဲဖွဈဖွဈ မငျးနားမှာ ဘဲကွီးရှိတယျ ဘဲလေး အားလုံး အေးဆေးပေါ့
(မငျးအမကေလှဲရငျပွောတာနျော သူ့တော့ငါကိုမနိုငျတာဟ) ဒါပမေဲ့ ငါ့မိသားစု ကိုငါခဈြတယျ) ဒါပါဘဲ ဒီနဘေ့ာနဆေို့လား ထားပါတော့” လို့သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ နိုငျငံကြျောသရုပျဆောငျ မငျးသား ဖွိုးငှစေိုးကတော့ လကျရှိမှာတော့ စှယျစုံရပညာရှငျ ဦးအောငျကိုလတျမှာ ဒါရိုကျတာအဖွဈနဲ့ တာဝနျယူရိုကျကူးနတေဲ့ နတျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျနတောဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ အငျဒိုနီးရှာနိုငျငံ ဘာလီကြှနျးမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအတှကျ ရိုကျကူးရနျအတှကျရောကျရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ဖွိုးငှစေိုးကတော့ မိနျးမခြောခြောလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သားခြောလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ တဈခတျေတဈခါ ဗီစီဒီခတျေထဲကနေ့ ပြိုပြိုမမေတေို့ရဲ့ အသညျးကြျောမငျသားတဈလကျဖွဈခဲ့ပွီး ယနအေ့ခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုရရှိနတေဲ့ မငျးသား ဖွိုးငှစေိုးရဲ့ သားခြောလေးဟာ ဖဖေလေုပျသမြှလိုကျအတုခိုးနပေါပွီတဲ့နျော။ ပရိသတျတှကေတော့ ဖွိုးငှစေိုးရဲ့ သားခြောလေးကွောငျ့ ယက်ခမကွီးလို့ ချေါခံနရေပါပွီနျော။
Source: Phyo Ngwesoe
“သားဖြစ်သူကို မေမေကလွဲရင်ကျန်တာအေးဆေးပါလို့ ပြောလာတဲ့ ဖြိုးငွေစိုး”
တစ်ခေတ်တစ်ခါ ဗီစီဒီခေတ်ထဲကနေ့ ပျိုပျိုမေမေတို့ရဲ့ အသည်းကျော်မင်သားတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ မင်းသား ဖြိုးငွေစိုးကတော့ သားဖြစ်သူကို မေမေကလွဲရင် ကျန်တာအေးဆေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို “ဟိုဘဲကြီးနဲ့ဒီဘဲလေး ဘဲကြီးလုပ်သမျှဘဲလေးကလိုက်လုပ်တယ်။ ကဲ ဘဲကြီး သတိသာထားနေတော့ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ သိပ်မကြာခင်စတွေ့တော့မှာ. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မင်းနားမှာ ဘဲကြီးရှိတယ် ဘဲလေး အားလုံး အေးဆေးပေါ့
(မင်းအမေကလွဲရင်ပြောတာနော် သူ့တော့ငါကိုမနိုင်တာဟ) ဒါပေမဲ့ ငါ့မိသားစု ကိုငါချစ်တယ်) ဒါပါဘဲ ဒီနေ့ဘာနေ့ဆိုလား ထားပါတော့” လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဖြိုးငွေစိုးကတော့ လက်ရှိမှာတော့ စွယ်စုံရပညာရှင် ဦးအောင်ကိုလတ်မှာ ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ တာဝန်ယူရိုက်ကူးနေတဲ့ နတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှာနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ရိုက်ကူးရန်အတွက်ရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးငွေစိုးကတော့ မိန်းမချောချောလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သားချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါ ဗီစီဒီခေတ်ထဲကနေ့ ပျိုပျိုမေမေတို့ရဲ့ အသည်းကျော်မင်သားတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ မင်းသား ဖြိုးငွေစိုးရဲ့ သားချောလေးဟာ ဖေဖေလုပ်သမျှလိုက်အတုခိုးနေပါပြီတဲ့နော်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဖြိုးငွေစိုးရဲ့ သားချောလေးကြောင့် ယက္ခမကြီးလို့ ခေါ်ခံနေရပါပြီနော်။
Goo Hara ရေးသားခဲ့တဲ့ မှတျစုနဲ့စီစီတီဗီမှတျတမျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ရဲတပျဖှဲ့ထုတျပွနျ
“ခရီးသှားရငျးလမျးလုပျသားတှအေတှကျ အာဟာရဒါန လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ရှပေိုးအိမျ”
” စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ဖေးမကူညီနေတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းအား (၁၀)သိန်းကျော်လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် ဦးဧရာ”
“ကိုယျတောငျ့တမိတဲ့ နလေ့ေးတဈနအေ့ကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ မမေီကိုကို”